Nepal Infrastructure Bank Ltd.(Nepal Infrastructure Bank Ltd.) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
निफ्राले प्रदेश नं. १ मा पूर्वाधार क्षेत्रको विकास लागि वित्तीय तथा प्राविधिक सहकार्य गर्ने
काठमाण्डौ । सार्वजनिक निजी साझेदारीका माध्यमबाट प्रदेश नं. १ को पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि परियोजना विकास तथा कार्यान्वयनको चरणमा आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहकार्य तथा सहयोग र अन्य आवश्यक सेवाहरुको सम्बोधन गर्न प्रदेश नं. १ को सार्वजनिक निजीसाझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) बीच...
निफ्राको धितोपत्र कारोबार आगामी साताबाट हुने, कति हुनेछ ओपनिङ रेन्ज ?
काठमाण्डौ। हालसम्मकै ठूलो आईपीओ निष्कासन गरेको नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक (निफ्रा) को धितोपत्र कारोबार आगामी सातादेखि हुने भएको छ। निफ्रा र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) बीच आगामी बिहीबारसम्म सम्झौता हुने सम्भावना रहेको छ। यदि बिहीबार सूचीकरण सम्झौता भएमा आगामी साता आइतबारबाट भने निफ्राको दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार हुनेछ। नेप्सेले...
हालसम्मकै ठूलो आईपीओ बिक्री गरेको निफ्राले दोस्रो त्रैमासमा कति कमायो ?
काठमाण्डौ । भर्खरै हालसम्मकै ठूलो आईपीओ बिक्री गरेको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म ३५ करोड २२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिसम्म बैंकको यो नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा भने १२.५४ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही...
आयो निफ्राको आईपीओ रिजल्ट, यहाँ हेर्नुहोस्
काठमाण्डौ । हालसम्मकै ठूलो नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) को आईपीओको रिजल्ट सार्वजनिक भएको छ। धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईबीएल एस क्यापिटलको काठमाण्डौ लाजिम्पाटस्थित मुख्यालयमा बिहान १० बजे एक कार्यक्रमबीच निफ्राका आईपीओ बाँडफाँड गरिएको थियो। आईपीओ बाँडफाँड कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण क्यापिटलको...
कहिलेसम्म आउला निफ्राको आईपीओको फाइनल रिजल्ट ?
काठमाण्डौ । हालसम्मकै ठूलो नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) को आईपीओ आज शुक्रबार बाँडफाँड भए पनि रिजल्ट आउने अझै केही घन्टा लाग्ने भएको छ। धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईबीएल एस क्यापिटलका अनुसार आईपीओ बाँडफाँडपछि डाटा प्रोसेसिङका लागि केही समय लाग्ने भएको हो। अबको कम्तीमा २ घन्टाभित्र आईपीओ बाँडफाँडको...
यसरी भयो निफ्राको आईपीओ बाँडफाँड, कसले कति पाए ? रिजल्ट केही समयपछि आउने
काठमाण्डौ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) को आईपीआ आज शुक्रबार बाँडफाँड भएको छ। धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईबीएल एस क्यापिटलको काठमाण्डौ लाजिम्पाटस्थित मुख्यालयमा बिहान १० बजे एक कार्यक्रमबीच निफ्राका आईपीओ बाँडफाँड गरिएको छ। आईपीओ बाँडफाँड कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण क्यापिटलको फेसबुक पेजमा पनि...
काठमाण्डौ । नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) को आईपीओ बाँडफाँड भोलि शुक्रबार बिहान १० बजे हुने भएको छ। धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईबीएल एस क्यापिटलको काठमाण्डौ लाजिम्पाटस्थित मुख्यालयमा निफ्राको आईपीओ बाँडफाँड हुनेछ। आईपीओ बाँडफाँड कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण क्यापिटलको फेसबुक पेज पनि गरि�...
निफ्राको आईपीओ आउँदो शुक्रबारसम्म बाँडफाँड गर्ने तयारी
काठमाण्डौ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) को आईपीओ आउँदो शुक्रबारसम्म बाँडफाँड गर्ने तयारी भएको छ। धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईबीएल एस क्यापिटलका एक अधिकारीका अनुसार नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर को आईपीओमा प्राप्त आवेदनको डाटालाई आज मंगलबार साँझसम्म फाइनल गर्ने र भोलि बुधबार प्रिअलटमेन्ट गर्ने तयारी...
काठमाण्डौ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) को आईपीओमा हालसम्मकै धेरै आवेदन परेको छ। सेयर निष्कासनकर्ता तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईबीएल एस क्यापिटलका अनुसार साँझ ६ बजेसम्म हालसम्मकै ठूलो यो आईपीओमा १५ लाख २९ हजार ४६० आवेदकले १८ करोड १२ लाख ८६ हजार ७२० कित्ता खरिदका लागि आवेदन दिएका छन्। यो कुल १८ अर्ब १२ करोड ८६ लाख ७२ हजार...
काठमाण्डौ । हालसम्मकै ठूलो नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) को आईपीओ भर्ने समायावधि थपिएको छ। सीडीएससीका अनुसार ‘मेरो सेयर’ प्राविधिक समस्या आएका कारण आज अन्तिम दिन केही घन्टाका लागि आईपीओ भर्ने समाय थपिएको हो। आज साँझ ६ बजेसम्म यो आईपीओमा आवेदन दिन सकिने सीडीएससीले जनाएको छ। यसअघि यो आईपीओमा बैंकिङ समयसम्ममात्र...
इन्फ्रास्टक्चर बैंकको आईपीओमा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम, कति परे आवेदन ?
काठमाण्डौ । नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक लिमिटेडको ८ अर्ब रुपैयाँबराबरको आईपीओमा आवेदनको ओइरो लागेको छ। आज अन्तिम दिन यो बैंकको आईपीओमा हालसम्मकै सर्वाधिक आवेदनको रेकर्डसमेत कायम गरेको छ। यसअघि चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको आईपीओमा १२ लाख ५० हजार बढीले आवेदन दिएका थिए। सेयर निष्कासनकर्ता तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइबीएल एस क्यापिटलका...
निफ्राको आईपीओ भर्नुभयो ? आज आवेदन दिने अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा)ले निष्कासन गरेको हालसम्मकै ठूलो आईपीओमा आवेदन दिन आज मंगलबार (माघ ६ गते) अन्तिम दिन रहेको छ। बैंकले गत माघ २ गतेबाट ८ करोड कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको छ। यो आईपीओमा आज बैंकिङ समयसम्म आवेदन दिन सकिने धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको...
निफ्राको आईपीओमा मागभन्दा १.८७ गुणा बढी आवेदन, कति पुग्यो ?
काठमाण्डौ । हालसम्मकै ठूलो नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) को आईपीओमा थामिनसक्नु आवेदन परेको छ। धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईबीएल एस क्यापिटलका अनुसार सोमबार साँझ ५ बजेसम्म यो आईपीओमा ११ लाख ८० हजार ११० आवेदकबाट १४ करोड १९ लाख ५२ हजार १४० कित्ता खरिद आवेदन परेको छ। यो बैंकले गत पुस २ गतेदबाट कुल ८ करोड कित्ता आईपीओ...
रु. ८ अर्बको आइपीओ ल्याउन लागेको इन्फ्रास्टक्चर बैंकलाई कर कार्यालयको सम्मान
काठमाण्डौ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा आयोजित नवौं राष्ट्रिय कर दिवस २०७७ विशेष कार्यक्रममा उक्त कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारका करदातामध्ये आ.व.२०७६/७७ मा सबैभन्दा बढी आयकर बुझाउने नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडलाई सम्मान–पत्र प्रदान गरी कदर गरेको छ । उक्त सम्मान–पत्र आन्तरिक राजश्व कार्यालय नयाँ...
मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई चितवनको द फर्न रेसिडेन्सीमा विशेष छुट
आपसमा गाभिएपछि समता र घरेलु लघुवित्तको एकीकृत कारोबार आजबाट सुरु